Hotelbeds inozivisa Bali senzvimbo yekushanyira yechipiri edition ye MarketHub Asia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Indonesia Kuputsa Nhau » Hotelbeds inozivisa Bali senzvimbo yekushanyira yechipiri edition ye MarketHub Asia
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Indonesia Kuputsa Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Hotera, mubhedha unotungamira wepasirese, wasarudza Bali senzvimbo yekugamuchira yechipiri edition yeHotelbeds´ MarketHub Asia chiitiko chichaitika kubva 22nd - 25 Gumiguru.
MarketHub Asia ndeyekukoka-chete, chiitiko chemazuva matatu chakapindwa nevanhu vanosvika mazana matatu emahara akakosha emahotera emahotera kubva kune ese akakosha misika yeAsia-Pacific neMiddle East.
Vachapinda gore rino vanotarisirwa kusanganisira vakuru vakuru uye vanoita sarudzo kubva kune vanoshanya, ndege, uye kuvimbika uye mibairo zvirongwa.
Chiitiko ichi chinotevera kubudirira kuchangobva kuitika kweAmerica neEuropean MarketHub editions iyo Hotelbeds yakaitwa muna Chivabvu muCancun neIstanbul zvichiteerana, imwe neimwe yakapindwa nevanhu vanopfuura mazana matatu nemakumi mashanu enharaunda yega yega yakakosha vatengi vevatengesi veB350B. Chiitiko cheMarketHub Asia gore rino chichaitika pasi penyaya ye 'SHIFTING FUTURES' uye ichaongorora mashandiro anoita chikamu chekufamba kushanduko dzazvino indasitiri uye shanduko munzvimbo dzakaita sehunyanzvi, kuomarara kwekugovera, kubhadhara, uye data.
Platinum, Goridhe, Sirivheri neBronze ekutsigira mapakeji achiri kuwanikwa kumakambani anoshuvira kuwana chinzvimbo chega pamisika yavo pamberi pevatengi veAsia-Pacific vevatengesi vevatengesi - uye vatsigiri vepamutemo vachaziviswa munguva inotevera.
Pamusoro pezvo, Hotelbeds inodada nekusimbisa kuti hotera dzinogashira MarketHub Asia yegore rino ichave Iyo Westin Resort Nusa Dua, Conrad Bali uye Hilton Bali Resort.
Carlos Muñoz, Bedbank Managing Director kuHotelbeds, akataura kuti: “Ndiri kufara zvikuru kusimbisa kuti MarketHub Asia yegore rino ichave iri muBali, Indonesia - imwe yenzvimbo dzinoyevedza uye dzinoyevedza dzevashanyi.
“Takaparura chirongwa chekutanga cheMarketHub Asia makore maviri apfuura muBangkok uye takagamuchira mhinduro yakanaka kwazvo! Iyi vhezheni icha tarisa pane yedu 'SHIFTING FUTURES' theme, kuongorora zvakadzama ramangwana rehotera pekuparadzira pekugovera eco-system.
“Zviitiko zve MarketHub zvegore rino zviri kutinakidza zvikuru sezvo zviri zviitiko zvekutanga zvikuru sekambani imwe yakabatanidzwa. Pamusoro pegore rapfuura tanga tichishanda nesimba kugadzira bhizinesi idzva uye rakakwenenzverwa kuti tishandire zvirinani vatinoshanda navo kusanganisira: hutsva uye hwakasimbiswa hutungamiriri; imwe chete account manejimendi uye yekubhadharisa poindi kune vese vadyidzani, kusanganisira vafambi vatengi uye hotera kuvhurwa kweDhijitari Management dhipatimendi; uye chivakwa cheIT chakasimudzirwa kuita chikuva chitsva. "
Seyakakosha uye yakajairika indasitiri inogadziriswa kubvira 2009, MarketHub ndeimwe yezviitiko zvinotungamira zvekuunza indasitiri yekufamba pamwechete, nezvipfumbamwe zviitiko zvekare muAmerica, zvishanu muEurope, uye imwe muAsia.